SMS Vendors | Kutumira Meseji Vatengesi
Wednesday, May 19, 2010 Muvhuro, Ndira 16, 2017 Adam Mudiki
Yenhare Kushambadzira iri kukurumidza kuve chinhu chakakosha chevazhinji mabhajeti ekushambadzira. Mazhinji mafoni ekushambadzira anouya mune imwe yematwo matatu:
SMS / Meseji Mameseji
Nharembozha Webhu uye Zvikumbiro zveMahara zvinowanzopindirana uye zvine mifananidzo yakajeka. Kukanganiswa kwezvose izvi ndezvekuti zvinodhura kuzviita nekuchengetedza. Nekuda kweizvi makambani mazhinji anotanga kuita kwavo kushambadzira nharembozha neSMS, izvo zvakakonzera kuputika muhuwandu hwevatengesi veSMS. Vamwe vevatengesi ava vamwe vakanaka kwete zvakanyanya uye vamwe vangori… Saka chii chinonzi mutengesi wakanaka weSMS? Ndosarudza sei mutengesi weSMS / Meseji?
Pane zvinhu zvitatu zvakakosha zvekutarisa kana uchisarudza SMS Vendor:
Mutengesi anounza mameseji kuburikidza neiyo shortcode kana kushandisa sms kune email magedhi? Chero maSMS Meseji mameseji mutengesi anofanirwa kushanda naye anofanirwa kushandisa shortcode. Iko kushandiswa kweemail kune sms magedhi ekutengesa nhare anotyora iwo anotakura mazwi ebasa uye kazhinji haana kuvimbika.
Mutengesi ane maMobile Marketing Nyanzvi pane vashandi Idzi inyanzvi dzisingango zive chete mune zvehunyanzvi zvinodiwa zveMobile Marketing Association nhungamiro asi zvakare dzakakura pakubatsira iwe kuburitsa zvirimo zvinoenderana nepakati. Kushambadzira nharembozha inzira yakasarudzika nekuda kwehunhu hwayo uye meseji inofanira kugadzirwa uine izvi mupfungwa.
Ndezvipi zvinotaurwa nevatengi vevatengi nezve yavo sevhisi sevhisi? - Vanofara vatengi chiratidzo chemutengesi akanaka, zvinoita sezviri pachena handiti?
Mobile Kushambadzira iri kukura kuva indasitiri yakasimba asi ichiri diki uye kune vatambi vakawanda mumutambo. Ita shuwa kuti iwe unoita rako rekuchikoro paunenge uchifunga nezve wekufambidzana naye.
Tags: mobile marketingSMSsms kushambadza
Kugadzirisa Yako Yekunyorera Chirongwa Chemukati
Akanaka mapoinzi, Adam. Kusarudza mutengesi wenharembozha yeSMS kunogona kukuremedza. Tarisa uone ino blog post kune mamwe akakosha mapoinzi ekufunga (uye mibvunzo yekubvunza) kana uchifunga nezveSMS nhare mutengesi: http://lunchpail.knotice.com/2010/04/28/tips-for-choosing-an-sms-mobile-vendor/